Kadhi reCoinbase rave kuenderana neApple Pay | IPhone nhau
Cryptocurrencies ndeyehasha dzese. Pese pandinenge ndichiziva vanhu vazhinji vanoisa mari mazviri, chimwe chinhu chingave chakaipa nekuti idzo njodzi dzekudyara ... Zvisinei, kana tikasarudza nezverudzi urwu rwekudyara, imwe yemapuratifomu anozivikanwa ndeye Coinbase, chikuva chatinogona zvakare tine vhiza reVISA kuti tikwanise kushandisa yedu mari yemadhora mumazuva edu ezuva nezuva. Iye zvino ivo vangogona kubatanidza kadhi reCoinbase muApple Pay. Ramba uchiverenga kuti isu tinokupa iwe zvimwe zvakawanda nezve iyi nyowani yekubatanidza muApple Pay.
Iko kusanganisa kunobatsira kubvira inotibvumidza kushandisa kadhi iri muApple Pay kunyangwe isu tisati tine kadhi rekunyama ratinaro. Vashandisi vanotova neako vanogona zvakare kuwedzera yavo yekare kadhi kuApple Pay. Kadhi rinoshanda nekushandura chero cryptocurrency yatinayo kumadhora ekuUS. Iyo kadhi rinoshanduka-shanduka sezvo isu tichigona kutakura madhijitari akadai se Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Basic Attention Token (BAT), Augur (REP), 0x (ZRX), kana Stellar Lumens (XLM). Ehezve, ramba uchifunga kuti ese ari maviri kadhi uye maCoinbase account ane makomisheni saka iwe unofanirwa kuve pachena kuti iwe unoda kupinda munyika ino. Ehezve, zvichienderana nezano redu muCoinbase tinogona kukwira kusvika ku4% kumashure mu cryptocurrency mibairo.
Iwe unoda kuisa mari mu cryptocurrencies? zivisa iwe pachako zvakanaka, uye pamusoro pezvose, investa zvine hungwaru uchifunga nezve njodzi yekushanda uku. Zvese zvekudyara hazvina kugadzikana saka iwe unogara uchifanira kufunga nezve kurasikirwa kunogona kuve iwe, saka usaise mari chero chinhu chaungademba. Kudzokera kuchinyorwa chekadhi, ndizvo sarudzo inonakidza kwazvo kune vashandisi veCoinbase, izvozvi tinayo muApple Pay saka isu takatarisana neimwe yeakanakisa makadhi e cryptocurrency anoonekwa mune Apple chikwama. Uye iwe, ndiwe vashandisi veCoinbase? Iwe unofarira cryptocurrencies? Unoona sei kuuya kwekadhi remhando iyi kuApple Pay?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Pay » Kadhi reCoinbase ikozvino rinotsigira Apple Pay
IPhones 13 Inogona Kunonoka Nekuda Kwe Semiconductor Kuperevedza